हिरासतमुक्त भएलगत्तै गजुरेलले भने : कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउँछौं - Best Khabar
हिरासतमुक्त भएलगत्तै गजुरेलले भने : कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउँछौं
३० डिसेम्बर, २०१९
काठमाडौं । सिमा मिचिएको विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका बेला सिंहदबार गेटबाटै पक्राउ परेका नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले सरकारप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन् । उनले नेपाल भारत सिमावर्ती कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने पार्टीको अभियान सफल पारिछाड्ने उद्घोष समेत गरे ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्बद्ध देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका संयोजक समेत रहेका गजुरेलले वर्तमान सरकार फाँसिवादतफ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै त्यसका विरुद्ध आफूहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । गजुरेलले हिजो सिमा अतिक्रमणबारे नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार जाने क्रममा आफूहरुलाई गिरफ्तार गरेकोमा कडा आपत्ति समेत जनाए । हिरासत मुक्त भएलगत्तै काठमाडौंमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘हिजोको घट्ना पूर्व अनुमानभन्दा बाहिरको घट्ना हो ।
हामी सरकारलाई जानकारी गराएर नै ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार गएका थियौं । तर, प्रहरी ज्यादती भयो । हाम्रा साथीहरुमाथि अन्धधुन्ध लाठी चार्ज भयो । हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन चाहेका थियौं, तर उहाँ पूर्णतयः बेड रेष्टमा भएको खबर उहाँको सचिवालयबाट आएपछि हामीले पनि रक्षामन्त्रीलाई नै ज्ञापनपत्र बmुझाउने भनेर समय लिएरनै त्यसतर्फ गएका थियौं ।’
गजुरेलले हनुमानस्थान् परिसरबाटै आफूहरुमाथि धरपकड भएको सुनाए । उनले भने,‘त्यहाँ खटिएका प्रहरीहरु डिएसपीको कमाण्डमा थिए । हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो र्याली निकाल्दा किन यसो गरिएको भनेर डिएसपीलाई सोध्दा उहाँले माथिको आदेश भन्नुभयो । हामीले पनि उहाँलाई भन्यौं, माथिको आदेश दिने मान्छे को रैछ ? हामी पनि जानौं न भनेर सोध्दा गिरफ्तार गरियो । अन्धधुन्ध लाठीचार्ज गर्दा ८ जनाभन्दा बढि घाईते भए ।’
उनकाअनुसार लाठी चार्जमा घाईते हुनेहरुमा नेताहरु दिनेश शर्मा, पवनमान श्रेष्ठ, सुरेश श्रेष्ठ, सुनिता बुढाथोकी, शारदा महतलगायत थिए भने पक्राउ पर्नेहरुमा सिपी गजुरेल, परि थापा, पवनमान श्रेष्ठ, सुरेश श्रेष्ठ, दिपक बहादुर शाही, फुरनाम्गेल, वसन्त बोगटी, खगेन्द्र छन्त्याल, पदम भण्डारी, ढोग प्रसाद अधिकारी, मीन गिरी, सुन्दर श्रेष्ठ, नरेन्द्र कार्की, अमित योञ्जनलगायत थिए । उनले हिजो घटेको घट्ना प्रायोजित थियो भन्ने दाबी गरे । नेपालको भूमी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक राखेर भारतले नयाँ नक्शा निकालेपछि आफूहरुले भारतको सो कदमको विरोध गरेको पनि उनले सुनाए ।
गजुरेलले भने,‘भारतले आफ्नो नयाँ नक्शामा नेपाली भूमी राखेपछि अहिले नेपालमा पार्टीहरु, विभिन्न संघ, संस्था, बौद्धिक व्यक्तिहरु, ख्याँतिप्राप्त कलाकारहरुले पनि विरोध गरे । हामी पनि विरोधमा उत्रिएका थियौं । पछिल्लो समय यो शिथिल भएको थियो । हामीले फेरी यो विषयलाई उठायौं । सरकारले कतै यो विषयलाई दबाएर लैजान चाहेको थियो होला ? हामीलाई त हिजोको सरकारी कदमबाट यो आशंका पैदा भएको छ ।’
हिजोको घट्नालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा मूलधारका मिडियामा राम्रो कभरेज भएको पनि उनले सुनाए । गजुरेलले भने,‘हिजोको कदमले मुलुकमा ध्रुवीकरण पैदा गरेको छ । यो गम्भिर खतराको कुरा हो । देशको सीमा मिचिएको विषयमा कुरा उठाउँदा हामीलाई देशभक्त भनिएको छ । अनि देशभक्तहरुमाथि नै किन दमन गरियो ? हामीमाथि नै लाठी चार्ज भयो ।’
राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा नारा लगाउँदा आफूहरुको ब्यानर च्यातिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा बोल्दा हाम्रा ब्यानर च्यातिए । हामीले त सरकारसँग सहकार्य गरेर जान चाहेका थियौं ।
तर, हामीले नचाहँदा नचाहँदै देशमा ध्रुवीकरण हुन लाग्यो ।’ भारतले नेपाली भूमी मिचेर आफ्नो नक्शा जारी गर्दा नेपालले भने आफ्नो नक्शा पनि जारी गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कामपनि गरेन ।’ उनले नेपालको संविधानलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट भनेर चर्चा गरिएको सुनाउँदै देशको संविधानमा निशान छाप नै भारतीय नक्शाको डुप्लिकेट रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘लिम्पियाधुराको चुच्चो नै गायब छ । यो त हद भयो ।’ गजुरेलले मुलुकमा यतिवेला महँगी, भ्रष्टाचार, दमन, अत्याचार विद्यमान हुँदाहुँदैपनि सबै कुरा सहेर सरकारलाई पनि साथमै लिएर राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा आवाज उठाएको बताए ।
उनले भने,‘हामी त नक्शा बनाउन सक्छौं । तर, के गर्नु हामीले बनाएको नक्शा बैद्य हुँदैन् । सरकारले जारी गर्दा पो बैद्य हुन्छ ।’ उनले नेपालको सीमा मिचिएको विषयमा नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तहमा वार्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीको लेभलमा किन वार्ता भएन ? मोदी र ओलीबीच वार्ता हुनको लागि के ले रोक्छ ? किन लापरवाही ? हिजो जनकपुरमा मोदीजी आउँदा राजस्थानी लुगा लगाएर भेट्न गएको होईन ?’ उनले आफूहरुले मोदीलाई भेटेर नहुने भन्दै सरकारले यो काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार फाँसिवादतर्फ जान लागेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘हिजो हामीलाई पक्राउ गरिएपछि पक्राउ परेका हाम्रा महासचिव परी थापाजीले रक्षामन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो, किन यस्तो प्रहरी ज्यादती भनेर सोध्दा उहाँले तपाईहरुलाई अब सरकार फाँसिस्ट भयो भन्न सजिलो भयो भनेर भन्नुभयो ।’ उनले आफूहरुको लागि राष्ट्रियताको मुद्दा नै प्रधान भएको सुनाए । उनले भने,‘हाम्रो लागि देश ठूलो कुरा हो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा हाम्रो पार्टीको पहिलो उद्देश्य हो । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो हो भनेर भन्न पाईँदैन् ? यसो भन्दा हामीले के अपराध गर्यौं ?’
माईतीघर मण्डलामा पुषको जाडोमा सर्लाहीका उखु किसानहरु आन्दोलित भएको सुनाउँदै उनले वर्तमान सरकारलाई त्यो सुन्ने धैयर्ता नभएको जिकिर गरे ।
एमसीसीबारे नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आईपिएसको अंग भए नस्विकार्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेको अवस्थामा अमेरिकाले एमसीसी आईपिएसको अंग भएको बताएपछि अहिले प्रचण्ड चुप भएको बताए । उनले भने,‘प्रचण्डबाबु किन चुप भए ? अमेरिकाले एमसीसी आईपिएसको अंग भनेपछि उहाँको बोली नै बन्द भयो ।’ नेपाले अमेरिकाको सामरिक रणनीतिमा सामेल हुँदा नेपालको असंलग्नताको नीति भत्किने पनि उनको टिप्पणी छ ।
उनले नेपाल अमेरिकी फौजी रणनीतिमा सामेल भए नेपाललाई केही पनि फाईदा नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘अहिले देश संकटको घडीमा छ । हामी त्यही भएर सडक संघर्षमा उत्रिएका हौं ।’ उनले राष्ट्र बचाउने अभियानमा नेपालको मिडियाबाट जति सहयोग हुनुपर्ने अपेक्षा थियो त्यति नपाएको उनको गुनासो छ ।
उनले आफूहरुले राष्ट्र जोगाउने आन्दोलन सुरु गरिसकेको पनि बताए । उनले भने,‘गणतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि हामीले आन्दोलन सुरु गरिसकेका छौं । यसमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् । नेपाललाई विदेशीको रणभूमी हुनबाट जोगाउनुपर्छ । हामी सबै एकजुट भएर लाग्यौं भने कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सक्छौं ।’ उनले यो अभियानलाई सघाउन पार्टीपंक्ति लागि पर्ने बाताए । हिजो पक्राउ परेका गजुरेलललाई एकरात हिरासतमा राखेर आज प्रहरीले रिहा गरिदिएको थियो ।
कास्कीको लुम्ले केन्द्रबिन्दु बनाएर गयो भूकम्प
जेठ १५ सम्म लकडाउन लम्ब्याउन सिफारिस
कुबेत, बहराइन र दुबईमा शुक्रबारमात्रै थप ३५ नेपालीमा कोरोना संक्रमण
पर्वतको फलेबास र महाशिलाका ५ जनामा कोरोना पुष्टि
देशभर १०९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २७ जनाको उपचार सफल
काठमाडौं छाड्दै सर्वसाधारण, ५ दिनमा १ लाख बढी बाहिरिए
२०७६ जेठ १ गते बुधबार
१५ मे, २०१९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले...
अमेरिकन आइडलमा उपविजेता बने नेपाली गायक दिवेश
२०७७ जेठ ५ गते सोमबार
१८ मे, २०२०काठमाडौं । अमेरिकामा जारी चर्चित सांगीतिक प्रस्तुती...
२०७६ कार्तिक ७ गते बिहिबार
२४ अक्टोबर, २०१९ टेक्सास । पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा...
विवाहिता महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता नेपालकी अनिला श्रेष्ठ सहभागी हुँदै (फोटोफिचर सहित)
१९ डिसेम्बर, २०१९ काठमाडौं । ईप्लानेट प्रा.लि.ले अनिला श्रेष्ठलाई...